သင့် IP address ကိုချက်ချင်း lookup | RAKKOTOOLS🔧
သင်၏အချက်အလက်များကိုဖော်ပြရန် (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ IP ကို, အသုံးပြုသူအေးဂျင့်, browser ကိုအရွယ်အစား, etc)
CSV ဖိုင်ကို download လုပ်ပါ
ဝယ်ယူ၏နေ့စွဲနှင့်အချိန် 2022-01-21 06:00:24
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ IP လိပ်စာ 34.230.9.187
ပြည် United States
OS ကို Unknown
ဘရောက်ဇာကိုသဟဇာတ encoding က format နဲ့ br,gzip
ဘရောက်ဇာကိုသဟဇာတမီဒီယာအမျိုးအစား (MIME အမျိုးအစား) text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
ကွန်နက်ရှင် status ကို Keep-Alive
ယခင် URL ကို
အသုံးပြုသူအေးဂျင့် CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Flash Player ကို၏ရရှိနိုင်
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား (screen resolution ကို)
"ဝယ်ယူ၏နေ့စွဲနှင့်အချိန်"	"2022-01-21 06:00:24" "ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ IP လိပ်စာ"	"34.230.9.187" "ဝေးလံခေါင်သီအိမ်ရှင်"	"ec2-34-230-9-187.compute-1.amazonaws.com" "ပြည်"	"United States" "ဧရိယာ"	"Ashburn" "OS ကို"	"Unknown" "ဘရောက်ဇာ"	"Unknown" "ဘရောက်ဇာကိုသဟဇာတဘာသာစကားကုဒ်"	"en-US,en;q=0.5" "ဘရောက်ဇာကိုသဟဇာတ encoding က format နဲ့"	"br,gzip" "ဘရောက်ဇာကိုသဟဇာတမီဒီယာအမျိုးအစား (MIME အမျိုးအစား)"	"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" "ကွန်နက်ရှင် status ကို"	"Keep-Alive" "ယခင် URL ကို""အသုံးပြုသူအေးဂျင့်"	"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"
သငျ့ (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ) အိုင်ပီလိပ်စာ, အိမ်ရှင်အမည်, တိုင်းပြည်နှင့်ဧရိယာကို။
သင်၏ Device ရဲ့ OS ကို, မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနှင့် screen resolution ကို။
ပြသသတင်းအချက်အလက် CSV ဖိုင်ထဲမှာရရှိနိုင်ပါသည်။
ဘယ်အရာကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ IP လိပ်စာဖြစ်သနည်း
IP address ကိုပြသထားတဲ့ပေး (စာချုပ်နှုန်း) သင်ဖို့တာဝန်သောဆက်ကပ်အပ်နှံ IP လိပ်စာဖြစ်ပါတယ်။
စာချုပ် status ကိုပေါ် မူတည်. တာဝန်ပေးအပ် IP address ကို fixed ကပြောင်းလဲမပေးပါ။
အိုင်ပီလိပ်စာများကို modem သို့မဟုတ် Router ကိုပြန်လည်စတင်နေပါတယ်, ထို setting များကိုပြောင်းလဲသွားကြသည်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအခြို့သောကာလလွန်ပြီသောအခါကိုပြောင်းလဲထားတဲ့ပြောင်းလဲနေသောစာချုပ်အပေါ်များသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်။ အချို့သောကန်ထရိုက်အောက်, IP လိပ်စာများကို fix နိုင်သည့်ပံ့ပိုးပေးရှိပါတယ်။
ဤနေရာတွင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့တခု IP address ကိုဒေသခံပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တာဝန်ပေးအပ်ကြောင်းပုဂ္ဂလိကအိုင်ပီမတူပဲအင်တာနက်ပေါ်ရှိအသုံးပြုတဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်ဦးအား host name ကဘာလဲ?
host name ကိုပြသထားတဲ့စာချုပ်အောက်မှာပေးနှငျ့သငျနောက်ဆုံးမှာအင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်သောကွန်ပျူတာ၏နာမတျော၏အချက်အလက်များဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ပျူတာများနှင့် router များအဖြစ် devices IP address ကိုသဖြင့်ခွဲခြားလျက်, အိုင်ပီလိပ်စာနဲ့ဆက်စပ်ကွန်ပျူတာများ၏အမည်အား host name ဖြစ်ပါတယ်နေကြသည်။
ဒီ tool များတွင် GeoLite2 ဟုခေါ်စာကြည့်တိုက်ကိုအသုံးပြုသည်။
ဒီထုတ်ကုန် https ကနေရရှိနိုင်, MaxMind အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး GeoLite2 ဒေတာများပါဝင်သည်: //www.maxmind ။ com ။
website တစ်ခုဖွင့် access ကိုခွင့်ပြုချက်အဘို့တိကျတဲ့ IP address ကိုထွက်ရှာဖွေခြင်း။
Remote access ပြုလုပ်ရန် VPN ကို setting တွင်ရိုက်ထည့်ဖို့ IP address ကိုထွက်ရှာဖွေခြင်း။ < / li သင့်ကွန်ပျူတာကိုစနစ်တကျ VPN ကို / Proxy server တစ်ခုကိုချိတ်ဆက်လျှင်။
သင့်ရဲ့ host name ကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်စာချုပ်အောက်ရှိ provider ကခန့်မှန်းသင် provider ကပြောင်းလဲပစ်ချင်သည့်အခါသို့မဟုတ် Internet Service Provider ကိုဆက်သွယ်>
website တစ်ခု debugging အခါ User-agent ပြောင်းခြင်းနှင့်မှန်ကန်စွာပြောင်းလဲအတည်ပြု။
နိမ့်ဆုံးဆုံးဖြတ်တစ်ဦးကိုကိုးကားနိုင်ရန်အသုံးပြုမှုအတွက်စက်ပစ္စည်း၏မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကိုစစ်ဆေးခြင်း / website တစ်ခု၏အမြင့်ဆုံး width ကို။
ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်တဲ့အခါမှာတခါမှာလိုအပ်သောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ထုံးစံဆက်သွယ်ခြင်း er ဝန်ဆောင်မှု။
Network မှ အိုင်ပီ
Ping IP ကိုအွန်လိုင်း
HTTP /2စမ်းသပ်ခြင်း